ဂိုးဖန်တီးမှု နဲ့ ပြန်လာတဲ့ အဲရစ်ဆင် ၊ အခွင့်အရေးမယူနိုင်တဲ့ နာပိုလီ ၊ ဒမ်ဘီလီ ကို ဖျောင်းဖြနေတဲ့ အော်ဘားမီးယန်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစာ သတင်းများ - xyznews.co
ဂိုးဖန်တီးမှု နဲ့ ပြန်လာတဲ့ အဲရစ်ဆင် ၊ အခွင့်အရေးမယူနိုင်တဲ့ နာပိုလီ ၊ ဒမ်ဘီလီ ကို ဖျောင်းဖြနေတဲ့ အော်ဘားမီးယန်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစာ သတင်းများ
ဒီတပတ် ပွဲတွေမှာ မီလန် ၂ သင်းစလုံး နိုင်ပွဲ မရဘဲ အမှတ်တွေ လျော့ခဲ့ တာကြောင့် နာပိုလီ ဟာ စီးရီးအေ အမှတ်ပေး ဇယားကို ဦးဆောင် နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရရှိ ခဲ့ ပေမယ့် ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲကို အနိုင် မယူ နိုင်ခဲ့ဘဲ ၁ ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တာကြောင့် တတိယ နေရာမှာသာ ဆက်လက် ရပ်တည် သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ကတော့ စကော့တလန် ကလပ် ရိန်းဂျားစ် အသင်းနဲ့ ကွင်းပိတ် ခြေစမ်းပွဲမှာ ဘရန့်ဖိုဒ့် အသင်း အတွက် ပါဝင် ကစားပေး ခဲ့ပြီး ၂ ဂိုးစီ သရေကျ ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ ဘရန့်ဖိုဒ့် ရဲ့ ဂိုးအားလုံးကို ဖန်တီး ပေးသွာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကနေ ဘာစီလိုနာ ကို ရောက်လာပြီး တနင်္ဂနွေ နေ့က ပွဲမှာ ဟက်ထရစ် ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး အော်ဘားမီးယန်း က သူဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းမတိုးဘဲ နွေရာသီမှာ အသင်းပြောင်းဖို့ နီးစပ် နေတဲ့ ပြင်သစ် တောင်ပံ ကစားသမား ဒမ်ဘီလီ ကို နူးကမ့်မှာ ဆက်နေဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆို ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟ လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒမ်ဘီလီ နဲ့ အော်ဘားမီးယန်း တို့ဟာ ဒေါ့မွန် အသင်းမှာ အတူ တွဲ ကစားခဲ့ကြဖူး သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တိုက်စစ်မှူး သောမတ်စ် မူလာ ဟာ ကိုဗစ် ပိုး တွေ့ရှိ ထားပြီး ရက်ဘူး ဆဲလ်ဘတ် နဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းဆင့် ဒုတိယ အကျော့ အတွက် မသေချာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ၊ ယူဗင်တပ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ဟာ လာမယ့် နွေရာသီမှာ ပတ်လည် ခြေစမ်း ပြိုင်ပွဲငယ် တခုကို ပြုလုပ် ဖို့ စီစဉ် နေပြီး အေစီမီလန် အသင်းလည်း ပါဝင်လာဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG ရဲ့ ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှူး နေမာ က ၂ နှစ် တကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလား အစီအစဉ်ဟာ သူ ငယ်ရွယ်စဉ် တုန်းက ပေါ်ပေါက် လာရမှာဖြစ်ပြီး ဒါမှ သူ့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ပိုမို အခွင့်အရေး ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘရာဇီး ဂန္ထဝင် ရိုနယ်ဒို နဲ့ စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ ဟာသလုပ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြကြီး ဂျာဂင် ကလော့ က သူတို့ ဟာ ဒီယေဂို ဂျိုတာ နဲ့ ရော်ဘတ်တို ဖာမီနို တို့ ၂ ဦး ကို ချဲလ်ဆီး နဲ့ ကစားမယ့် ခါရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ အမီ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား နေပါတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် ဟာ တနင်္ဂနွေတုန်းက ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေကို အရာဝတ္ထုတွေ နဲ့ ပစ်ပေါက် ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ကာ ရာသက်ပန် ကွင်းဝင်ခွင့် ပိတ်ပင် သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းဟာ ၂ နှစ် စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်ရှိ နေသေးတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း ကို စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင် နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ကိန်း ဟာ နည်းပြ ကွန်တီ ရဲ့ စီမံကိန်း မှာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမား အဖြစ် ရှိနေပြီး ပေါင်သန်း ၁၀၀ အထက် ရရှိမှသာ ရောင်းထုတ်ဖို့ စဉ်းစားသွားနိုင်တယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် ကွင်းလယ်လူ မာဆယ်လို ဘရိုဇိုဗစ် ကတော့ အသင်းနဲ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆိုဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ သွားခဲ့ပြီလို့ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ရေးသား ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ကတော့ ဘရာဇီး ကြယ်ပွင့်လေး ဗီနီဆီယပ် ဂျူနီယာ ကို လာမယ့် မတ်လ ထဲမှာ စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၁ တင်းနစ် ကစားသမား နိုဗက် ဂျိုကိုဗစ် ဟာ ဒူဘိုင်း ဒျူတီ ဖရီး ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲမှာ အီတလီ တင်းနစ် သမား လော်ရန်ဇို မူဆက်တီ ကို ၆-၃ ၊ ၆-၃ နဲ့ ၂ ပွဲပြတ် အနိုင် ကစားပြီး ဗိုလ်စွဲ ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article အသင်းဟောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ ဒါးဗစ် ဒဟဲယား
Next Article ဆာလာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုက်ကယ် အိုဝင် ရဲ့ အမြင်ကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပေါ်တင် ပြောချလိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်